Dzimwe nguva, Kana iwe uchifunga kuti yako yekunze yekupfeka kutaridzika yakapusa, unogona kugadzirira baseball cap mune yakasarudzika mitambo maitiro. Ichave rubatsiro rwakakura musitayera yako. Izvo hazvizoda zvinhu zvakawandisa zvidiki kuti zvishongedze, uye iyo baseball cap inogona kuita yako sitimendi yakasarudzika & Handsome, asi chii ...
Izvo zvinoita kuti vasikana vazhinji vade zvipenga zvakapetana ngowani, nekuti nekuipfeka, kunyangwe uine hunhu sei, iwe unozonzi "fesista". Saka mubvunzo ndewokuti, ndeipi nzira yakanaka yekupfeka yakadzika brim kuti utaridzike? Ndezvipi hats-brimmed hats? Ndeupi chimiro chechiso chakakodzera ...
Nzira yekusarudza machira eheti
Kutanga rega titaure nezve Cotton twill hats, pane akati wandei anowanzo shandiswa. Kazhinji jira rega rega rine huwandu hwesimbi uye huwandu. Kuverenga shinda zvinoreva hukobvu hweshinda yakarukwa. Kuwanda kwevanhu: Izvo zvirimo zvemavara kuverenga pane yeyuniti nharaunda, kazhinji 4 mativi inches. Iyo yakakura iyo inomiririra nhamba ...
Ndeipi hats yakanakisa yevakadzi
Zvekubuda, kunyangwe zvodii, neheti ndiyo nzira iri nyore yekuita kuti uve runako ipapo ipapo. Saka ndeapi marudzi eheti iwe aunogona kuve nawo? Kune vakadzi vanofarira kupfeka, aya mafashoni uye isingaperi, sarudzo dzakanaka. Nekudaro, kana iwe usinga zive zvakawanda nezve heti, iwo akasiyana ...
Ngano yezana ramakore, iyo 1935 firimu yezita rimwe chetero, ”gamba mune ngowani yepamusoro, firimu fred astaire akapfeka Fedora ngowani mufananidzo uye nhanho dzekutamba nhanho zvakakanganisa kugadzirwa kwemazera erwiyo nekutamba mafirimu, nekubatanidzwa kweheti refu kupinda dhizaini yeiyo posita firimu inonakidza. T ...
Kwakatangira Hats muChina
Munguva yechando, vanhu vanowanzo pfeka ngowani kudzivirira kutonhora uye kudziya. Asi vanhu pavakatanga kushandisa ngowani, yaisave yekudziya, asi yekuishandisa sechishongo. Hat yakagadzirwa munyika yedu kutanga kwazvo, idimikira rinoti "kurira kwazvo" "korona", "korona", rinoreva ...